Norway oo Mar kale u kordhisay Dadka Shaqo la'anta Mudada lagu helo Lacagta Dagpengar-ka Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaNorway oo Mar kale u kordhisay Dadka Shaqo la’anta Mudada lagu helo Lacagta Dagpengar-ka
Norway oo Mar kale u kordhisay Dadka Shaqo la’anta Mudada lagu helo Lacagta Dagpengar-ka
January 29, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Norway 0
Foto Leif Martin Kirknes
Dawladda Norway waxay soo jeedisay in dadka qaata lacagta shaqo la’aanta ee, laga bilaabo 1 Noofambar 2020, ay gaareen muddada ugu badan ee lacagta shaqo la’aanta, ay fursad u helayaan inay mar labaad codsadaan dheefaha shaqo la’aanta muddo xaddidan.
Wixii ka dambeeya 1 Nofeembar 2020, dad badan oo shaqo la’aan ah iyo kuwa shaqada laga joojiyey ayaa waayey xuquuqdooda gunooyinka shaqo la’aanta sababtoo ah waxay gaareen muddadii ugu badneyd. Isla mar ahaantaana, xaaladda infekshinka ayaa soo ifbaxday dhowaanahan, iyo tallaabooyinka xakameynta infekshinka ee hadda jira ayaa suuqa shaqada si gaar ah u baahan. Si loo caawiyo dadka xilligan gaarka ah.
”waxaan soo jeedineynaa in kuwa ka baxay nidaamka lacagta shaqola’aanta wixii ka dambeeyay 1 Nofembar 2020 ay dalban karaan inay dib ugu soo noqdaan 1 Febraayo, ayuu yiri wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Torbjørn Røe Isaksen.
Soo-jeedinta waxaa loola jeedaa in kuwa dhameeyay muddada ugu badan ay dalban karaan manfacyada shaqo la’aanta mar kale laga bilaabo ayna ku jiraan 1 Febraayo 2021. Muddada u dhexeysa 1 Noofambar 2020 iyo 31 Janaayo 2021.
NAV waxay ku wargalin doontaa dadka ay dhibaatadu saameysey in ay macquul tahay in markale la codsado iyo sida loo codsado. Macluumaadka sidoo kale waxaa lagu dhejin doonaa bogga Nav . Qiyaastii 8,500 oo qof ayaa gaari doona xadka ugu badan ee gunooyinka shaqo la’aanta muddada u dhexeysa 1 Nofeembar ilaa 31 Janaayo.